कोलार चुनखानी ः भ्रम र यथार्थ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कोलार चुनखानी ः भ्रम र यथार्थ
२०७१ फाल्गुन १५, शुक्रबार ०१:५५ गते
विश्वसम्पदा सूचीमा प्रस्तावित तथा सेनवंशी राजाको पालामा निर्मित पुराता¤िवक मह¤वको उपरदाङगढीको तला कोलार गाउँवरपर आपसी विवादका कारण बन्द अवस्थामा रहेको चुनढुंगा खानी उत्खनन् कार्य र त्यसलाई रोक्नका लागि माओवादी पार्टीले दिएको दबाबले चितवनमा थुप्रै भ्रम र यथार्थ उत्पन्न भएका छन् । सोसम्बन्धमा संक्षिप्त धारणा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
कोलार चुनढुंगा खानीको मुख्य लगानीकर्ता मधुसूदन भण्डारी सिन्धुपाल्चोक निवासी व्यवसायी
हुन् । २०५३ सालमा उनले सो खानी दर्ता गर्दा बिहारी मदन सरावगी र साही सेनाका पूर्वजर्नेल शिष शर्मालगायत ५ जनाको नाममा दर्ता गरिएको थियो । सो खानी २०६३ सालबाट सञ्चालनमा आएको
थियो । तर, आपसी मतभेदका कारण लामो समय सञ्चालन हुन सकेन । हालै चैत्र मसान्तसम्मका लागि परीक्षण उत्खनन्को प्रक्रिया सुरू भएको लगत्तै माघ १४ गतेदेखि माओवादी पार्टीले सो खानी उत्खनन् कार्य रोक्न दबाब दिएपछि सो चुनढुंगा खानी दोस्रोपटक बन्द भएको छ ।
कोलार चुनढुंगा खानीको सम्बन्धमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनको अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ वैशाखको उद्देश्यअन्तर्गत बुँदा १ र २ अनुसार सिंचाइ, खानेपानी र भूक्षय न्यूनीकरणका उपायहरु सुझाउने रहेको छ । जसको उद्देश्य नै स्थानीयको जीवन सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको अध्ययन विधिमा अध्ययन टोलीमा स्थानीय सरोकारवालाहरु समेत सहभागी भएको बताइएको छ । तर शक्तिखोर, पिठुवा, चैनपुर र रनपासमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने, चितवनको पर्यटन व्यवसायसमेत प्रभावित हुनसक्ने सो कोलार खानीको अध्ययन टोलीमा जिल्लास्तरका दलहरु, उद्योग वाणिज्य संघ र सम्बन्धित सबै स्थानीय निकायको सहभागिता
देखिन्न । अपारदर्शी र प्रायोजित व्यक्तिहरु राखेर सो अध्ययन भएको छ । अपारदर्शी अध्ययन विधिका कारण के हो ? प्रश्न उठेको छ । नेपालमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन कसरी तयारी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि कसैबाट छिपेको छैन ।
जिविस, चितवनको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, खानी सञ्चालनकै कारणबाट हाल सञ्चालनमा रहेको खानेपानी प्रणालीको मुहानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिँदैन । यद्यपि, हाल भएको मुहानको संरचना प्राविधिक रुपले सुरक्षित नदेखिएकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राविधिक टोलीले दोहोरो अर्थ लाग्ने र खानी मालिकसँग रकम असुली गर्ने नियतले प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । खानेपानी र सिंचाइ प्राकृतिक रुपमा भएका कारण प्राकृतिक जलाधारको रक्षाबाहेक अरु उपायहरु खानेपानीको मुहान रक्षा हुन सक्दैन । जलाधार भत्काएर मरूभूमि बनाएपछि मुहानको प्राविधिक सुरक्षा भनेको के हो ? त्यो काइते भाषा हेर्दा सम्बन्धित प्राविधिक टोलीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोही प्रतिवेदनको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, खानी उत्खनन् स्थल कोलार खोलाको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा वर्षात्मा हुने भलपानीबाट कोलार खोलाको जलाधार कोलार खोला चुनबाट प्रदूषित हुने र सोबाट शक्तिखोर खोला पनि प्रदूषित हुने देखिएकाले शक्तिखोलाबाट सञ्चालन हुने सिंचाइ प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । खानीबाट चुन, ढुंगा, बालुवा बगेर जाँदा खानेपानी, पशुपालन, पक्षी जगत र खेतमा समेत बालुवा पस्न सक्ने भन्ने प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ । त्यो प्रदूषणका विषयमा कुनै न्यूनीकरण विधि नअपनाइकनै सो खानी सञ्चालन गरिएको हुनाले स्थानीय निकायको निर्देशनसमेत आयोजना पक्षले उल्लंघन गरेको देखिन्छ । आयोजनाले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनले उत्पन्नपश्चात्को ढुंगा, माटो, भलपानी र खानेपानी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी कुनै पनि पूरा नगरेको स्पष्ट छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको सुझाव नं ३ मा भनिएको छ, हाल सञ्चालनमा रहेको खानेपानी प्रणालीको मुहान प्राविधिक रुपले असुरक्षित देखिएकाले तत्काललाई मुहान संरक्षणका कार्यहरु गर्ने । वितरण प्रणालीमा समस्या आएमा स्थानीय उपभोक्ताको समन्वयमा क्रमशः सुधार गर्दै जाने । तर, सो कार्य गरे नगरेको कुनै पनि अनुगमन छैन । अख्तियारको आँखा छल्ने व्यवसायीबाट कमिसन असुल्ने र चितवनको दोहन गर्नेबाहेक अध्ययन प्रतिवेदनको अरु नियत देखिन्न ।
२०७० चैत्र १ गते शक्तिखोर गाविसका ११ जना व्यक्तिहरु बसेर प्रभाव अध्ययन समितिका नाममा दूरगामी मह¤वका निर्णयहरु गरेका छन् । त्यसो गर्ने कानुनी हैसियत, क्षमता र नियतसमेत प्रस्ट छैन । एउटा गाविसका व्यक्तिले राष्ट्रिय मह¤वको उपरदाङगढी र लाखौँ जनताको सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन । सो बैठकमा जिविसका कर्मचारी, प्रायोजिक व्यक्तिहरु र मालिक पक्षमात्रको उपस्थिति हुनु तथा जिल्लास्तरका कुनै पनि दलका प्रतिनिधि र संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुनुले थप आशंका सिर्जना गरेको छ ।
२०७१ पौष १८ सर्वपक्षीय बैठक बसी गरेको भनिएको कथित निर्णय गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ । सो बैठकमा उपस्थित माओवादी प्रतिनिधि रेशम श्रेष्ठले पार्टीमा जानकारी नै नगराई जनविरोधी कार्य गरेको देखिन्छ । निम्नतम वर प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा नगरिएको अवस्थामा ३ महिनाका लागि परीक्षण उत्खनन् गर्न दिने निर्णय आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरेको देखिन्छ । शक्तिखोर–३ स्थित कोलार गाउँमा खानेपानीका लागि बोरिङ खन्ने भनी गरिएको निर्णय हास्यास्पद छ । किनकि, भरतपुरआसपासमा समेत बोरिङ सुक्दै गएको वर्तमान अवस्थामा कोलारको पाखामा बोरिङ खन्ने निर्णय दुनियाँलाई मूर्ख बनाउने धूर्तताबाहेक अरु केही होइन । यद्यपि, त्यही मूर्खता पनि थालनीसम्म गरिएको छैन । आईइइ प्रतिवेदनको सुझावसमेत लागू गरिएको छैन । खानीमा परेका जनताको पुनर्वासको विषयमा चर्चासमेत छैन । घरबास परेका जनतालाई उनीहरुको पूर्वपरिवेशअनुसारको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी अनुचित प्रभावमा पारी घरजग्गा कब्जा गरिएको देखिन्छ । शक्तिशाली सामाजिक संस्थाहरुलाई केही रकमले मुख थुनेर समूहको अहित हुनेगरी कार्य प्रारम्भ गरिएको देखिन्छ ।
शक्तिखोर–३ स्थित कोलार नामक गाउँ उपरदाङगढीको आधार शिविरजस्तै अवस्थितिमा रहेको छ । नेपाल सरकारको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पुराता¤िवक महत्वको भौतिक संरचनाको ५० मिटरनजिकसम्म उत्खनन् वा ठूलो संरचना निर्माण गर्न नपाइने प्रावधान छ । त्यस प्रकारको प्रावधान समथर भूभागका सम्बन्धमा बनाइएको हो । पहाडी क्षेत्रमा त्यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था अपूरो हुन्छ । किनकि, पहाडमा निश्चित पानी, ढल वा भन्ज्याङसम्म खनजोत गर्दा अथवा पहाड भत्काउँदा त्यसमाथि आड लिएर बसेको समग्र पहाड हल्लिन पुग्छ । त्यस दृष्टिले बढेर खोला र खोल्टार खोलाको दोभानसम्मको पहाडको सुरक्षा भएन भने कुनै पनि बेला उपरदाङगढी भासिन सक्छ । चितवनको एउटा गौरव र पर्यटकीय क्षेत्र खतरामा पर्दछ । कोलार खोलाको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्नेमा नष्ट गर्ने सोच आफैँमा विनासकारी छ । सो उत्खनन्ले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जल प्रदूषण र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भूक्षयका समस्याहरु पैदा हुन सक्छन् ।
२०६३ जेठ २द्द गते शक्तिखोर गाविसले कम्पनीलाई खानी सञ्चालन गर्न दिएको सिफारिसमा उल्लेखित सर्तमा शक्तिखोर गाविसका ५, ६ र ७ वडाका पानीका मुहान खानी उत्खनन् क्षेत्रभन्दा तल परेकाले खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिने उल्लेख छ । कोलार खोलाबाहेक त्यस क्षेत्रमा खानेपानीको अन्य स्रोत नै छैन । के त्रिशूलीको पानी लगेर वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिने हो वा बोरिङ खन्ने हो ? गाविसको दोस्रो सर्त सिंचाइ सुक्न गएमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने छ । तर, त्यो कहाँबाट भन्ने उल्लेख छैन । २०६३ सालको तुलनामा हालका सर्तहरु काइते शब्दाडम्बर र फितला छन् । शक्तिखोर ५, ६ र ७ वडाका खानेपानीको मुहान उत्खनन्को मुख्य क्षेत्र कोलारभन्दा तल परेका कारण खानेपानी सधैँ प्रदूषित हुने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरिएको देखिन्न । तसर्थ दलहरु, प्राविधिक, कानुनवेत्ता र वरिष्ठ नागरिकहरु समेत रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी त्यसले दिने निर्णयको आधारमा मात्र विवादको अन्तिम टुंगो लाग्न सक्छ । घरघरमा विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न हिँड्ने नेपालको प्रशासन र रकमी कानुनी प्रावधानमात्रै हेरेर समस्याको समाधान सम्भव छैन । हिजोका बिहारी लगानीकर्ताहरु रातारात हराएर नेपाली अुनहार देखिनु, राजनीतिक व्यक्तित्व र समाजमा अभद्र ठानिने कतिपय व्यक्तिहरु मालिकका रुपमा आउनु झनै रहस्यमय छ । तसर्थ, कोलारस्थित चुनढुंगा खानी बन्द गर्नु जिल्लाको हितमा छ । त्यस कार्यको थालनी माओवादी पार्टीले गरेको भए पनि साझा सरोकारको विषय बन्नुपर्छ । सबै दल र संस्थाबाट अनौपचारिक रुपमा हरियो संकेत पनि प्राप्त भएको छ । अन्धो कानुन, पैसा र बाहुबल तथा प्रशासनको दबाबमा जायज कदमका विरूद्धको हर्कत बढ्न सक्छ । त्यसका विरूद्ध समाजका सबै पक्षले साझा प्रयास थाल्न आवश्यक छ ।